आफ्नो टिमविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण भएपछि कलाकार दीपकराज गिरीले दिए यस्तो चेतावनी – ताजा समाचार
आफ्नो टिमविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण भएपछि कलाकार दीपकराज गिरीले दिए यस्तो चेतावनी
काठमाडौं – नेपाली चलचित्र क्षेत्रका निकै चर्चित र सफल कलाकार हुन् दिपकराज गिरी । चलचित्र छक्का पञ्जाबाट चर्चाको शिखरमा पुगेका दिपकराज पछिल्लो समय छ माया छपक्कैमा ब्यस्त छन् । उनको चलचित्र छ माया छपक्कै दशैको अवसरमा असोज २४ मा रिलिज हुदैछ । केहि दिन अघि यस चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक भएको ट्रेलर दर्शकले निकै रुचाएका छन् ।
यसैक्रममा हास्यकलाकार तथा अभिनेता दिपकराज गिरीले आफ्नो फेसबुकमा एक स्टाटस लेखेका छ । उनले आफ्नो टिमविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण भएपछि फेसबुकमा आफ्ना बिरोधिहरुलाई केहि कुराहरु लेखेका छन् । उनले स्टाटसमा दर्शकले माया गरिदिनु भो चलचित्रले दुर्लभ सफलता पायो के यो अपराध होरु भन्दै प्रश्न गरेका छन् । हेर्नुहोस् स्टाटस जस्ताको त्यस्तै
आज म लेख्दैछू….. हाम्रो समूह बिगत लामो समय देखि नेपाली चलचित्र र संगीतको को पक्षमा काम गर्दै आइरहेको छ , रात दिन नभनि हाम्रो संस्कृति को रक्षाको पक्षमा वकालत पनि गर्दै आइरहेको कुरा सबै आदरणिय मित्रहरू लाइ थाहै छ …अत यो कार्यले केहि सन्चालित तत्वहरूको निन्द्रा बिग्रिएको प्रमाण फेला परेको छ .. हाम्रो अकल्पनीय लगातारको सफलताले अत्तालिएका यि ब्यक्तिहरू सामाजिक संजालहरू मा समूह निर्माण गरेर (नक्कलि आइडि बनाइ ) हामि बिरूद्द बिष ओकलिरहेछन् …
आज म लेख्दैछू…..हाम्रो समूह बिगत लामो समय देखि नेपाली चलचित्र र संगीतको को पक्षमा काम गर्दै आइरहेको छ , रात दिन नभनि…
Gepostet von Deepak Raj Giree am Samstag, 21. September 2019
हामिले मेहनत गर्यो, दर्शकले माया गरिदिनु भो चलचित्रले दुर्लभ सफलता पायो के यो अपराध हो? नेपाली फिल्म र नेपाली संस्कृतीको पक्षमा आबाज उठाउनु गल्ति हो? त्यसैले यस्ता तत्वहरू संग सजक रहन म मेरा शुभचिन्तक र सत्यको पक्षमा आबाज निकाल्न सक्ने सम्पूर्ण सच्चा मित्रहरू मा आग्रह गर्दछू…. यस्ता प्रायोजित गालिले हाम्रो अभियान रोकिदैन , यो अटल छ , स्पष्ट छ
जय नेपाल …!!!